Cathay Pacific Airways waxay ku laabatay Madaarka Caalamiga ah ee Pittsburgh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Cathay Pacific Airways waxay ku laabatay Madaarka Caalamiga ah ee Pittsburgh
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hong Kong • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Iyada oo la isku dayayo in la soo bandhigo awood xamuul oo dheeri ah halka ay suurtogal tahay oo lagu caawiyo taageeridda silsiladaha sahayda ee caalamiga ah, Cathay Pacific waxay dib-u-habayn ku samaysay diyaaradda Boeing 777-300ER si ay ula jaanqaado dalabka maraakiibta ee sii kordhaya.
Diyaaraddii ugu dambaysay ee caalami ah si ay uga faa'iidaysato xawaaraha xamuulka ee PIT.
Diyaaradda fadhigeedu yahay Hong Kong waxay u adeegi doontaa Madaarka Caalamiga ah ee Pittsburgh ilaa dhammaadka sannadka.
Diyaaraduhu waxay imaan doonaan Isniinta iyo Jimcaha waxayna baxayaan maalinta xigta.
Hawlaha xamuulka ee Madaarka Caalamiga ah ee Pittsburgh (PIT) waxay heli doontaa dhiirigelin kale iyadoo la soo laabto laba jeer duulimaad toddobaadle ah Cathay Pacific Airways.
Cathay Pacific waxay bilawday adeegga 2-da bisha Ogoosto, 2021, iyada oo diyaaraddeeda Boeing 777-300ER ee rakaabka loo beddelay xamuul, iyada oo qorshuhu yahay inay u adeegto PIT illaa dhammaadka sannadka. Diyaaraduhu waxay imaan doonaan Isniinta iyo Jimcaha waxayna baxayaan maalinta xigta. Xamuulka saaran diyaaradda waxaa loogu talagalay warshadaha dharka.
Diyaaraduhu waxay duulimaadyadooda ka bilaabi doonaan Hanoi, Vietnam, iyagoo ku joogsan doona Cathay Pacific's Cargo Terminal ee Madaarka Caalamiga ah ee Hong Kong ka hor inta aysan u duulin PIT. Cathay Pacific waxay bilowgii adeeg xamuul u bilowday PIT bishii Sebtember 2020 iyadoo leh 20 duulimaad.
Awoodda PIT ee ah inay si dhakhso ah u dejiso xamuulka oo ay ugu rarto baabuurta xamuulka si ay u keento waa mid ka mid ah sababaha Cathay Pacific iyo lammaanaha gudbiyaha xamuulka Unique Logistics ay doorteen inay ku laabtaan hawlahoodii ugu dambeeyay ee xamuulka.
“Madaarka Caalamiga ah ee Pittsburgh goobtiisa juquraafi ahaan, taageerada bulshada, iyo hufnaanta hawlgalka ayaa na siiya jawi ku habboon inaan ka shaqeyno adeegga Vietnam oo leh Cathay Pacific ilaa aagga Pittsburgh,” ayuu yiri Marc Schlossberg, Madaxweyne Ku -xigeenka Fulinta ee Saadka Gaarka ah. “Saadka Gaarka ah ayaa qandaraas ku leh inay ka shaqeyso ku dhawaad ​​120 duulimaad oo caynkan oo kale ah oo dhowr diyaaradood oo ka kala socda Aasiya kuna sii jeedaan PIT iyo garoomada kale ee Mareykanka illaa 2021 -ka, iyagoo ku daraya awoodda xamuulka hawada ee qiimaha leh ee soo dejiyayaasha Mareykanka.”
“Duulimaadyo dheeri ah ayaa lagu dari karaa PIT marka hawlgalku kor u kaco,” ayuu raaciyay Schlossberg.